Nddị na ecommerce na 2020 | ECommerce ozi ọma
Nddị na ecommerce na 2020
Ọ dabara nke ọma, e nwere ọtụtụ ụzọ iji nwekwuo ahịa na ntanetị, ọtụtụ n'ime ha nwere ike itinye n'ọrụ nke ọma maka ọdịmma onwe anyị na nke ọkachamara. Site na ụzọ ndị mmadụ si azụ ahịa na etu esi ejikwa teknụzụ azụmaahịa dị n'ịntanetị - e-commerce na-ebido maka ụfọdụ nnukwu mgbanwe.
Anyị nwere ike ịme ọmụmụ gbasara etu azụmahịa e-commerce siri ruo n’afọ iri gara aga ma ọ bụ abụọ gara aga, mana na ngwụcha ụbọchị, ihe dị gị mkpa bụ ebe e-commerce dị ugbu a na ebe anyị na-aga.
Yabụ kedu ebe e-commerce dị ugbu a? Ọfọn, na njedebe nke 2019 (dịka data sitere na Statista) ahịa e-commerce zuru ụwa ọnụ nwere ahịa ruru ijeri $ 3.500 ma gụọ 14% nke ngụkọta nke ahịa mkpọsa n'ụwa niile.
1 Na ihe ga-abịa na 2020?
2 E-azụmahịa na ọnọdụ
3 B2B na-eto eto ... ma na-agbanwe agbanwe
4 Enyemaka na-echekwa izute ndị na-azụ ahịa
5 Ndị nkata na-emeziwanye ahụmịhe ịzụ ahịa
6 Shoppingzụ ahịa ekwentị na-aga n'ihu
7 Paymentzọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ
8 E-azụmahịa na-eme ka ihe ọhụrụ na-aga n'ihu
9 Ndebanye aha na-eme ka ndị ahịa na-alaghachi
Na ihe ga-abịa na 2020?
Ihe data a na-ebu amụma na site na njedebe nke 2020, ahịa e-commerce zuru ụwa ọnụ ga-erute ijeri $ 4.200 na akaụntụ maka 16% nke ire ere ahịa. Ọnụ ọgụgụ ndị a na-ebu amụma naanị ịrịgo ka anyị na-aga n'ihu na 20s.
Ma maka ndị nwe ụlọ ahịa, ọ dịghị mfe dịka ịnọdụ ala na ikiri usoro ego. Asọmpi n'ịntanetị siri ike. Ọnụego mgbasa ozi ka elu. Mkpu dijitalụ na-ada ụda. Na ụzọ ndị mmadụ na-azụ na-agbanwe.
Idebe usoro kachasị ọhụrụ na e-commerce, gụnyere nkwado arụmọrụ na ahụmịhe njikarịcha ntụgharị ihu, kachasị mkpa na-eto eto na mkpọsa mkpọsa 2020.
E-azụmahịa na ọnọdụ
Anyị na-ekwu banyere ihe a n'ezie otutu mmadu kwenyere nwere na-ele anya dị ka oké ihe ha na-ahụ na e-azụmahịa na mkpọsa nke afọ a. N’etughi ogha n’iru, nke a bu uzo anyi kachasi nma maka onwa ahia nke anyi huru (ma o bu n’iru ibu ndi isi) na 2020.
AR na-eme ka eziokwu nke ịzụ ahịa n'ịntanetị dị mma.
A ga-enwe olu na-abawanye ụda olu olu.
AI na-enyere ụlọ ahịa aka izute ndị na-azụ ahịa.
Nhazi nke saịtị na-eji ihe ọmụma ahụ iji mepụta ahụmịhe nke mmadụ.
Nnukwu data na-ekere òkè dị ukwuu n'ịmepụta ahụmịhe ahaziri iche.
Ntanetị nkata na-eme ka ahụmịhe ịzụ ahịa ka mma.
Shoppingzụ ahịa ekwentị na-aga n'ihu.
Formsdị ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ.
Isi na-enweghị isi, e-commerce nke dabeere na API na-eme ka ọhụụ na-aga n'ihu.
Ndị ahịa na-aza vidiyo ahụ.
Ndebanye aha na-eme ka ndị ahịa na-alaghachi.
Nkwado na-adịwanye mkpa.
Ndị ọchụnta ego ga-ebuli atụmatụ dijitalụ maka ntụgharị.
B2B na-eto eto ... ma na-agbanwe agbanwe
Eziokwu gbara ụba na-eme ka eziokwu nke ịzụ ahịa n'ịntanetị dịkwuo mma. Ya mere ịzụ ahịa n'ịntanetị nwere ọtụtụ elele: ịchekwa oge site na ịga n'ọtụtụ ụlọ ahịa, nyocha na ịlele ọnụahịa na nzuzo nke ụlọ nke aka gị, ịnweta ngwaahịa sitere na ụlọ ahịa ndị dị anya, yana ịchekwa oge na ego.
Ọ bụ ezie na nhọrọ nnyefe ebuputere nyere ohere ịzụ ahịa n'ịntanetị ka ọ bụrụ otu afọ ojuju dị ka ịzụ ahịa azụmaahịa, n'akụkọ ihe mere eme enweela ihu ala: ị gaghị enwe mmetụta ma ọ bụ hụ ngwaahịa ahụ na ahụ ma ọ bụ n'ụlọ.
A ga-enwe olu na-abawanye ụda olu olu. Loop Ventures na-ebu amụma na 75% nke ụlọ US ga-enwe ezigbo ọkà okwu site na 2025. Ndị mmadụ na-atụkwasịkwu obi na ndị enyemaka olu dị ka Google Assistant ma ọ bụ Amazon Alexa iji mee ihe niile site na ịlele ihu igwe na ịzụta ngwaahịa.
Dika otutu ulo na enweta teknụzụ a ma nwee obi iru ala n’iji ya zuta ihe, enwere otutu ahia ndi ahia ahia n’enweghi ike ịbanye n’ime ala.
Ọ bụghị mmadụ ole na ole na-eme nnyocha na ahịa ahịa a na-eme ka eziokwu ahụ pụta ìhè ugbu a na "oke òkè nke ngwọta olu-na-enyere aka na oghere azụmahịa na Amazon Alexa na Google Home" na elu nke ndepụta ha nke ọnọdụ maka afọ 2020 ka ha lezie anya .
Enyemaka na-echekwa izute ndị na-azụ ahịa
Akụkụ ọzọ nke ịzụ ahịa ọnlaịnụ nke akụkọ ihe mere eme na-efu na ịzụ ahịa n'ịntanetị bụ onye mmekọ ụlọ ahịa na-enye aka nke nwere ike ịnye ndụmọdụ ngwaahịa na ntuziaka ahaziri iche dabere na mkpa ma ọ bụ arịrịọ nke onye zụrụ ahịa.
Dika ọgụgụ isi na mmụta igwe na-abawanye oke, ọtụtụ azụmaahịa e-commerce amalitelarị ịkwalite ya iji nye ndụmọdụ ndụmọdụ ngwaahịa. Ọ bụghị naanị na nke a nwere ike ịbawanye na 2020, mana ọ bụ naanị ọnụ mmiri iceberg n'ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi nye aka na mkpọsa na azụmahịa.
Brandsdị ejiji na-eji ọgụgụ isi eme nhọrọ dị oke mma maka mgbasa ozi dijitalụ ha. Ihe si na ya pụta bụ mmụba nke 76% na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ndị mmadụ chọrọ ịma na ụdị ndị ahụ na-eche banyere ha, a ga-ahazi atụmatụ azụmaahịa n'ụzọ kwekọrọ na ya. Anyị ahụla omume na-abụghị nke a na mgbasa ozi mmekọrịta, ebe AI na-amụta site na nkwupụta ndị na-adịghị mma sitere n'aka ụmụ mmadụ, mana ndị na-azụ ahịa nwere ike ịchọ mmetụta ahụ. Ọ bụrụ na bots nwere ike ịmụta ịmepụta ahịrịokwu iji gosipụta mmetụta, ụlọ ọrụ ga-enwe ike ịkụziri ha ka ha nye nkasi obi na ngwaahịa dabere na ọnọdụ ndị ahịa.
Nhazi nke saịtị na-eji ihe ọmụma ahụ iji mepụta ahụmịhe nke onwe. Dịka e kwuru n'elu, atụmatụ dị n'ụdị azụmaahịa a na-abawanye na e-azụmahịa yana yana ọtụtụ ngwa. Otu ụzọ enwere ike iji ya bụ ịnakọta ozi gbasara ndị ọbịa wee nyere aka mee ka saịtị ahụ kwekọọ n'ihe ha chọrọ na mkpa ha. Mụ mmadụ na-eji ahụmịhe na ngwaahịa ndị emegharịrị ka ha mara. Nke a bụ ihe na - efukarị na ntugharị n'ịntanetị, ịzụ ahịa ọrụ onwe onye.
E gosipụtara mmejuputa ahụmịhe nke ahaziri iche na saịtị ma ọ bụ n'ịchụ ahịa iji gosipụta mmetụta siri ike na ego ha nwetara, yana otu nnyocha chọpụtara na ọ nwere mmụba 25% na ego. Adịbeghị anya data na-egosipụtakwa na nhazi nke onwe nwere ike belata ọnụego bounce site na 45%.
Ndị nyocha onwe ha na ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa e-commerce na-ahụ na njiri mara nke ụdị usoro a na azụmaahịa dijitalụ na-abawanye uru na 2020. Ebe ndị ahịa na-agbakwunye ma na-emekwu data, ha ga-enwe ike ịmepụta ahụmịhe dị ịtụnanya. na-eche ịkwa akwa.
Nnukwu data na-ekere òkè dị ukwuu n'ịmepụta ahụmịhe ahaziri iche. N’ezie, ọ bụghị n’ịhazi ihe niile ka ọ dị nhata, ndị ọkachamara dị iche iche nwere ọhụụ dị iche iche ebe ịhazi azụmahịa e-commerce ga-aga n’afọ 2020. Ndị ọzọ na-ahụkwa onwe ha dị ka mma agha ihu abụọ n’ihi na ebulitere data na nzuzo dị ka nchegbu. Maka ụfọdụ ndị na-azụ ahịa.
N'okwu nke ọ bụla na-ebilite n'oge ahụ, enweghị obi abụọ ọ bụla na njikarịcha ntụgharị mgbanwe nwere amụma nke ya banyere etu nhazi onwe onye ga-esi na-agbanwe yana nchegbu gbasara data.
“Dika ndi oru teknụzụ na-aga n’ihu ịgbasa ma weta ọrụ ndị ọzọ dị n’ụlọ, nhazigharị ga-abanye na ntanetị nke ihe. Na mgbakwunye na ịhụ ntụnye na igwe nchọta ihe ma ọ bụ usoro ịzụ ahịa, anyị ga-ahụ ha na igwe igwe na igwefoto anyị. Agbanyeghị, ka etinye iwu ụfọdụ, anyị nwere ike ịhọrọ ịghara isonye. Nke a ga - eme ka eserese na - atọ ụtọ - ndị nwere ahụmịhe nke onwe na ndị na - enweghị ya. Nke a ga-enwe mmetụta na-adọrọ mmasị na otu anyị nwere ike isi ruo ndị ọrụ ọhụụ.
Ndị nkata na-emeziwanye ahụmịhe ịzụ ahịa
N'etiti ikike nke onwe onye ọ na-adị mgbe niile na chatbot nwere ike ịrụ ọrụ nke onye na-ere ahịa. Ndị nkata na-ekwe ka ụlọ ahịa na-ekwurịta okwu na ọtụtụ puku ndị ahịa, na-enye ha mmetụta nke nlebara anya onwe ha na ndụmọdụ ndị a na-echebara echiche dabere na nzaghachi ha.
Na n'eziokwu, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ ikori na bots na ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ onwe ha. Otu nnyocha chọpụtara na ihe karịrị 60% nke ndị ahịa na-akọ na ha na-ahọrọ ịnweta weebụsaịtị, ngwa, ma ọ bụ nkata na-aza ajụjụ ha dị mfe. Otu n'ime isi ihe kpatara nke a bụ n'ihi oge nzaghachi ngwa ngwa.
Ndị ọkachamara na-ebu amụma na 80% nke azụmahịa ga-eji nkata na 2020. Na mgbakwunye na ịbawanye ugboro, enwere ọtụtụ ụzọ ndị ọkachamara na-ebu amụma na bots ga-akpalite.
Shoppingzụ ahịa ekwentị na-aga n'ihu
Ruo ugbu a, anyị elekwasị anya n’ụzọ ndị azụmahịa e-commerce si emechi oghere na iweta ahụmịhe brik na ntanetị. Agbanyeghị, a ka nwere ọtụtụ ihe azụmaahịa na e-commerce nwere njikọ na azụmaahịa onwe onye. Otu uru doro anya bụ ikike ịzụta ebe ọ bụla.
Ugbu a na United States, a na-eme atụmatụ na ihe karịrị ọkara nke ndị ahịa na-eji ekwentị eji arụ ọrụ. Na Europe, 55% nke ndị ahịa na-azụ ahịa na mkpanaka.
E-azụmahịa ulo oru na-eme ike ha nile iji nye a enweghị nkebi ọrụ ahụmahụ na ha e-azụmahịa na saịtị na a ọnụ ọgụgụ nke ịkwụ ụgwọ nhọrọ, gụnyere e-wallets. China bụ onye ndu n'ịkwụ ụgwọ na ntanetị, WeChat na Alipay nke ọ bụla nwere ihe karịrị ndị ọrụ ijeri XNUMX.
N'ihi nke a, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na otu n'ime ọtụtụ ihe kpatara ha kwenyere ga-enyere mgbanwe a dị mkpa aka bụ eziokwu nke mmelite nke ogo na njikọta dị ukwuu nke ịkwụ ụgwọ ekwentị. Dịka otu ụzọ dị ukwuu nke mgbanwe na 2020.
Azịza ọzọ nye ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọrụ mkpanaka bụ iji PWA ma ọ bụ ngwa weebụ na-aga n'ihu. PWA nwere ike inye ndị ahịa mkpanaka ahụmịhe nwere ụdị ahụmịhe nwere atụmatụ dịka ike ịrụ ọrụ na-adịghị n'ịntanetị ma nye ohere ịpị ọkwa. Ha nwere ike inye ụdị e-commerce ụzọ ọzọ iji melite njem ndị ahịa maka ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị site na iji ngwaọrụ mkpanaka.
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ
Anyị na-ekwu maka atụmanya gbasara nhọrọ ịkwụ ụgwọ ekwentị, mana ndị ahịa na-echekwa nhọrọ ịkwụ ụgwọ ka mma. Ọmụmaatụ, mgbe ha zụrụ si a mba ọzọ azụmahịa ha nwere ike na-atụ anya na-enwe ike ịzụta iji ha họọrọ obodo ugwo na-eweta.
Ọzọkwa, a na-eji ndị ahịa eme ka ịdị mfe nke ịzụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị ka Amazon na Walmart. Ha na-echekwa ozi ịgba ụgwọ nke ndị ahịa na ozi mbupu iji mee ngwa ngwa na ngwa ngwa na-enweghị mkpa ịbanye ọtụtụ data. E-azụmahịa na ebe nrụọrụ weebụ na-abawanye iji nhọrọ ịkwụ ụgwọ dịka Apple Pay, Paypal, na nhọrọ ego ndị ọzọ na-enye ohere maka ịkwụ ụgwọ enweghị mgbagha.
N'echiche a, enwere ọtụtụ ndị nyocha na azụmahịa n'ịntanetị ndị kwenyere na ịhazi ego na-aga n'ihu n'afọ 2020.
Cheedị otu ọ dị mfe ịzụta ngwaahịa na weebụsaịtị ọ bụla ma ọ bụrụ na, n'oge nzụta, ị nwere ike ịnye ha NJ pụrụ iche maka gị. Njirimara a pụrụ iche ga-abụ maka ọrụ obere akpa ego nke ga-echekwa ozi ịkwụ ụgwọ gị niile, mbupu na adreesị ịgba ụgwọ, mmasị, wdg. Companlọ ọrụ dịka Apple na PayPal ewerela foto a n'oge gara aga, mana echere m na ọ nwere ike ịdịkarị karịa.
E-azụmahịa na-eme ka ihe ọhụrụ na-aga n'ihu
Ruo ugbu a, ọtụtụ n'ime usoro ndị dị na ndepụta a bụ ihe ndị ahịa na-emekọrịta ozugbo. Agbanyeghị, usoro teknụzụ nke azụ nke ụlọ ahịa n'ịntanetị kachasị amasị gị abụghị ihe ị maara, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ nwere nnukwu mmetụta na ahụmịhe gị niile.
Azụmaahịa na-enweghị isi bụ azịza nke na-enye ohere ikpo okwu e-commerce nke ụlọ ahịa ka anapụ kpamkpam kpamkpam site na ngosi ngosi nke n'ihu. Nke a nwere ike inye ha ohere iji CMS dị adị ma ọ bụ omenala, DXP, PWA, ma ọ bụ ọtụtụ ihu ndị ọzọ iji mezue nchịkọta teknụzụ ha. Nke a nwere ike inwe mmetụta dị ike maka ihe ụlọ ahịa ahụ nwere ike mezuo site na ire ahịa ọdịnaya, SEO, na ahụmịhe dijitalụ na ihu ya.
Afọ 2020 nwere ike ịhụ mmụba na nnabata nke isi ngwụcha ngwụcha isi - ọkachasị azịza ọhụụ enweghị isi dịka nke ọzọ IoT na PWAs. O yikarịrị ka a ga-atụle ya site na ahịa sara mbara nke na-agụnye obere azụmaahịa na usoro B2B.
Ndebanye aha na-eme ka ndị ahịa na-alaghachi
Maka 2020, anyị abịala ogologo njem site na mkpụrụ nke klọb ọnwa. Atụmatụ ndenye aha nwere ọtụtụ uru maka ndị na-ere ahịa n'ihi na ha na-eme ka ọ dị mfe ịkọ mkpa nrube isi ma debe ndị ahịa maka uru dị ogologo oge.
Expertsfọdụ ndị ọkachamara dọrọ aka na ntị na ndị na-azụ ahịa na-amatawanye mmetụta nke ọrụ ndenye aha ọtụtụ na mmefu ego ha, yabụ na ha nwere ike ịchọ karịa n'ọdịnihu. Ndị na-ere ahịa na-azụ ahịa azụmaahịa a n'afọ na-abịanụ kwesịrị ịmara ihe na-eme ka ndenye aha ha dị mkpa.
Nkwado na-adịwanye mkpa. N'ihi na a pụrụ ịsị na, n'ihe a na-atụghị anya na ọ ga-abụ ihe na-agabiga, ndị mmadụ na-aghọtakwu banyere òkè mkpebi mkpebi ha na-ekere n'obere akụ̀ nke ụwa.
Nkwado na-adịwanye mkpa maka ndị na-azụ ahịa n'oge a, ụdị na-achọkwa ụzọ iji tinye ya na ngwaahịa ha, usoro nnabata ha, na azụmaahịa ha. Otu nnyocha chọpụtara na 50% nke ndị zaghachiri chọrọ ka nkwado ọzọ na ụlọ ọrụ ejiji, na 75% chọrọ ịhụ obere nkwakọ ngwaahịa.
Ulo oru agha gha ebuli atumatu dijitalụ maka ntughari. N'agbanyeghị ihe ha na-ere, o yikarịrị ka ha nwere ụfọdụ ndị asọmpi. Nọ n'ihu ha pụtara ọ bụghị naanị ịnweta ọtụtụ ụzọ na saịtị gị, kama ịtụgharị ha ozugbo ha nọ ebe ahụ. Ntughari mgbanwe bụ nchegbu na-arịwanye elu na 2020 ka ụlọ ọrụ na-ele anya na-edozi peeji nke ngwaahịa ha ma jide n'aka na ngwaahịa ha pụtara na ụzọ ahịa ọtụtụ mmadụ ha. Nke a nwere ike ịgụnye mgbasa ozi Facebook siri ike, mgbasa ozi ịzụ ahịa Google, ma ọ bụ mgbalị ịzụ ahịa dijitalụ na saịtị. Dịka otu n'ime uru doro anya bụ ikike ịzụta site na ebe ọ bụla. Ọmụmaatụ, mgbe ha zụrụ si a mba ọzọ azụmahịa na ha nwere ike na-atụ anya na-enwe ike ịzụta iji ha họọrọ obodo na-eweta ego, dị ka ihe na-esiwanye ọsọ nkịtị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nddị na ecommerce na 2020
Ihe eserese, ọrụ nwere nnukwu ọdịnihu